Ogaden News Agency (ONA) – Tahriibayaal Badan oo Ku Qaraqmay Xeebaha Liibiya.
Tahriibayaal Badan oo Ku Qaraqmay Xeebaha Liibiya.
Posted by ONA Admin	/ January 20, 2019
Qaramada Midoobay (QM) ayaa sheegtay in ay rumaysan tahay 270 qof oo muhaajiriin (Tahriib) ah ay ku qaraqmeen badda Mediterranean-ka maalmihii u dambeeyay.
Diyaarad ay leeyihiin ciidamada badda Taliyaaniga ayaa soo gaadhay goobta ay musiibaddu ka dhacday ee biyaha Liibiya. Doon ka samaysan caag ayaa sii quusaysay markii ay diyaaradaasi goobta soo gaadhay.
Shaqaalihii saarnaa diyaaradda ayaa waxaa u suuragalay in ay badda ka soo badbaadiyaan saddex qof ,balse waxaa halkaasi ku dhintay dad badan oo doonta saarnaa. Dadka la soo badbaadiyay ayaa labo waxa ay u dhasheen dalka Sudan, halka midka kale uu u dhashay dalka Gambia. Dadkan badbaaday ayaa waxay sheegeen in doonta ay saarnaayeen 120 qof.
Afhayeen u hadashay hay’adda qaxootiga ee UNHCR Liz Throssel ayaa sheegtay in dadka muhaajiriinta ah ay u baahan yihiin caawin. QM ayaa rumaysan in loo baahan yahay in wax dadaal ah aan lala hadhin marka ay soo yeedho qaylo-dhaan lagu badbaadinayo dadka ku qaraqmaya badda. Waxa ay sidoo kale QM ay ku baaqday in la caawiyo maraakiibta badbaadinta muhaajiriinta si ay shaqadooda u gutaan.
Flavio Di Giacomo waa afhayeen hay’adda socdaalka QM ee IOM ayaa sheegay in loo baahan yahay in la furo marin ay soo maraan dadka doonaya in ay ka soo tallaaban badda Mediterranean-ka. Balse dowladda Taliyaaniga ayaa waxaa ka go’an in ay joojiso in muhaajiriinta ay soo gaaraan xeebaheeda.
Waxa ay dowladda Taliyaaniga rumaysan tahay in maraakiibtaa samatabixinta ee hay’adaha ay gacan wayn siiyaan muhaajiriinta. Xukuumadda Taliyaaniga ayaa ku dooday in arrintan ay dhiirigalinayso in dad badan ay naftooda galiyaan halis.
Sanaddii 2018, 2,262 qof ayaa ku dhimatay iyaga oo isku dayaya in ay ka soo tallaabaan badda Mediterranean si ay u gaaraan dalalka Yurub.